Leukemia kanine: Ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ity aretina ity | Tontolo alika
Ny leukemia kanine dia aretina lehibe mety hitrangan'ny alika. Ny fisehoan'io aretina io dia matetika miseho amin'ny tranga vitsy dia kely, ny tranga 10%.
Ny fiompiana alika lehibe kokoa no mora voan'ny leokemia, raha ny marina, amin'ny enin-taona, ny risika marary. Zavatra iray hafa tokony hotadidina dia izany io aretina io dia misy fiatraikany amin'ny ankamaroan'ny vehivavy.
1 Inona no vokatr'io aretina io amin'ny alika?
2 Inona no karazana leokemia azon'ny alika?
2.1 Tamin'ny niandohany
2.2 Ho an'ny fampandrosoana azy
3 Ny antony mahatonga ny leukemia amin'ny canine
4 Soritr'aretina leukemia kaninina
5 Karazana leokemia
5.1 Leukemia mahery
5.2 Leukemia mitaiza
6 Diagnostika leukemia kanine
7 Fitsaboana leukemia kaninina
Inona no vokatr'io aretina io amin'ny alika?
Leukemia kanine mitranga noho ny neoplasma malignant izay mitranga ao anatin'ny tsokan-taolana, manokana kokoa amin'ny precursors hematopoietic. Amin'ity tranga ity, ny sela dia tsy manana fahaiza-manao ampy hahatratrarana ny fotoam-pahamatorany, noho izany dia mijanona amin'ny toerana tsy dia miasa na tsy matotra izy ireo.
Raha resaka a leukemia aleukemika, misy fiantraikany mivantana amin'ny tsoka ny taolana, saingy tsy manao toy izany amin'ny ra na miseho kely fotsiny. Noho io antony io dia simba tsikelikely ny hery fiarovan'ny hery fiarovan'ny vatana, izay mampitombo ny risika mety harary ilay alika.
Inona no karazana leokemia azon'ny alika?
Matetika io aretina io Voasokajy araka ny niandohany sy ny fivoarany.
Leukemia Lymphoblastic: amin'ity tranga ity dia misy fitomboan'ny famoronana lymphoblast amin'ny tsoka taolana. Indraindray dia mety ho maranitra ary indraindray mitaiza.
Leukemia myeloid: Amin'izany, ny tsoka taolana dia miteraka fitomboan'ny sela myeloid amin'ny leukocytes. Toy ny teo aloha, dia mety ho maranitra na maharitra.
Ho an'ny fampandrosoana azy
Leukemia mahery: miseho tampoka izany ary rehefa miseho dia ilaina ny fitsaboana maika.
Raha tsy voatsabo haingana araka izay azo atao izy dia mety ho faty ao anatin'ny fotoana fohy ilay biby, midika izany fa tena matotra ny fisehoany. Ny leukemia maranitra matetika dia mazàna amin'ny karazan'omby fa tsy amin'ny alika. Amin'ity tranga ity, ny sela dia tsy mahatratra ny fahamatorana ara-dalàna, ka mijanona ho sela tsy matotra izy ireo.
Leukemia mitaiza: io karazana leukemia io miseho mandritra ny fotoana elaRaha ny marina dia misy ny fotoana izay tsy aharihary lava. Amin'ny leukemia mitaiza, ny sela dia tonga amin'ny fahamatorana, na eo aza izany dia tsy matotra tanteraka. Mateti-pitranga izany amin'ny saka sy alika antitra.
Ny antony mahatonga ny leukemia amin'ny canine
Betsaka ny antony mety hiteraka an'io aretina mampidi-doza io izay mety hamarana ny ain'ny biby fiompintsika, na izany aza, mbola tsy misy fahalalana marina momba ilay antony mahatonga ny leukemia amin'ny alika.
Anisan'ireny antony ireny no ahitantsika ireto manaraka ireto:
Antony fototarazo; misy fiantraikany amin'ny alika lehibe kokoa ary indrindra ny vavy.
Fipoahana mafy amin'ny taratra ionizing.
Fifampikasohana tamin'ny vokatra vita amin'ny akora simika.
Ny aretina vokatry ny bakteria sasany izay mety miteraka aretina.
Soritr'aretina leukemia kaninina
Alika tratran'io aretina io, matetika tsy manana soritr'aretina manokanaNoho io antony io, alohan'ny famantarana fa misy alika tsy mahazatra ny alika, dia ilaina ny mitsidihana haingana ny mpitsabo biby.
Ny fitiliana ny leukemia canine dia tena ilaina tokoa, satria raha vitantsika ara-potoana izany, hosakananay tsy ho faty ny alikanay.
Anisan'ireo soritr'aretina mahazatra indrindra, azontsika atao ny manonona ireto manaraka ireto:
Fanaintainana ao amin'ny kibo
Fihenan-danja amin'ny lanjan'ny vatana.
Mitobaka be ny lymph.
Fiakaran'ny tahan'ny fo.
Miaina tsy ara-dalàna
sasany soritr'aretin'ny tsoka izay mety miovaova arakaraka ny karazana leukemia, na maranitra na maharitra.
Hemoglobinina na tsy fahampian-dra araka ny fantatra.
Fihenan-danja lehibe amin'ny takelaka mivezivezy ao amin'ny lalan-drà.
Maizina kokoa noho ny mahazatra ny loko hoditra.
Diagnostika leukemia kanine
Amin'ny ankabeazan'ny aretina dia tena zava-dehibe ny diagnostika, satria amin'izany fomba izany no ahafantarana ny aretina amin'ny fotoana hitsaboana azy haingana araka izay azo atao sy amin'ny leokemia. tena ilaina amin'ny alikanay io.
Rehefa avy nitondra ny alika tany amin'ny mpitsabo biby dia hanomboka hanatanteraka avy hatrany ilay antsoina hoe the tantaram-pitsaboana. Ho an'izany, ny manam-pahaizana dia hametraka fanontaniana sasany mifandraika amin'ny tantaran'ny biby, ny fotoana nisehoan'ny soritr'aretina, ny famantarana be indrindra mandrapahatongan'ny andro farany, raha tsy mahazaka alika ilay alika na raha mitsabo azy amin'ny fanafody isika, raha mijaly izy avy amin'ny karazana fikorontanana, taona, ohatrinona ny lanjanao, ny firaisana, na raha efa nihintsana ianao.
Ireto data ireto dia ilaina amin'ny fahaizan'ny matihanina fantaro tsara ny fijalian'ny biby fiompinay.
Aorian'izay dia hanohy ny vet Diagnostika klinika-lesional, izay hanombohany fanaraha-maso lalina, amin'ny teny hafa, dia hanao fandinihana amin'ny an-tsipiriany mba tsy hisy tsy ho voamariky, izany dia satria izay rehetra mety ho tsikaritry ny matihanina dia ilaina tokoa mba ahitana diagnostika marina.
Ny fomba tsara indrindra hanamafisana ny ahiahy rehetra mety ananan'ny mpitsabo dia ny a Diagnostika amin'ny laboratoara. Amin'ity faritra ity dia ho fantatra raha mararin'ny voan'ny leukemia iaretan'ny alika na maharitra.
Fitsaboana leukemia kaninina
Alika miaraka a leukemia karazana maranitraAmin'ny ankapobeny dia manana vinavina malina izy ireo ary matetika dia tsy mamaly tsara ny fampiharana ny fitsaboana izy ireo. Raha ny tena izy ny vintana ny alika velona mandritra ny fotoana maharitra dia tena manify.
Ny fitsaboana dia misy fampiharana ara-simika, mba hanomezana andian-dahatsoratra anticancer ho an'ny biby fiompy.
Indraindray io fomba io dia hatao. Hampiasaina fanafody izay tsy manana poizina avo lenta amin'ny tsoka taolana, toy ny vincristine. Raha sendra tsy misy thrombositopenia na neutropenia mafy dia omena fanafody izay manana hetsika myelosuppressive lehibe kokoa, toy ny tranga amin'ny doxorubicin na cyclophosphamide.
Tena ilaina ny mitadidy ao an-tsaina fa hilaza amintsika tsara kokoa ny mpitsabo karazana fitsaboana inona no azo omena ny alika arakaraka ny toe-javatra.
Ilaina koa ny mamatsy antsika antibiotika noho ny loza mety hitranga amin'ny aretina ateraky ny bakteria hafa, toy ny mpanala fanaintainana, hanamaivanana ny fanaintainana mety hisy fiatraikany amin'ny alika.
Etsy ankilany, ary raha mijaly amin'ny alika leukemia maharitra ny alikantsika, dia ho tsara lavitra noho ny tranga teo aloha ny vinavinany, saingy ilaina ny mampihatra fitsaboana raha vantany vao tsikaritra ny aretina.
Rehefa voamarina fa voan'ny leokemia maharitra, alika mazàna velona elaela kokoa noho fotoana. Ny fanafody ampiasaina amin'ireto tranga ireto dia prednisone miaraka amin'ny klorambucil.
Ireo fanafody ireo dia omena am-bava na amin'ny intramuscularly ary takiana fonon-tanana, satria io fanafody io dia mety misy poizina.
Ny tsara indrindra dia ny fananantsika ilay alika tafasaraka tanteraka amin'ny biby hafa, satria hianjera be ny fiarovany ary tsy afaka miatrika aretina hafa isika satria mety hamarana ny ain'ny biby izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Leukemia kanine
Fahasamihafana eo amin'ny amboadia sy ny alika